လှူရတာများတော့ အရမ်းဆင်းရဲတာပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လှူရတာများတော့ အရမ်းဆင်းရဲတာပေါ့
Posted by phone_kyaw on Feb 10, 2013 in Copy/Paste | 19 comments
တခါတုန်းက ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်တယ်။ လမ်းလည်ခေါင်မှာ သူတောင်းစားအုပ်စုက သူ့ အမေ့လင်အပိုင်စားပေးထားတဲ့ နေရာ ကြနေတာပဲ။ အလည်ခေါင်တည့်တည်မှာ ခန့် တည်တည်နဲ့ တောင်းစားလို့ ဗျာ။ ကျနော်လည်း မူးနေတော့ သူတောင်းစားတွေကို အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အမယ်…ဆရားသမားတွေက စိတ်တောင်ဆိုးသေးတယ်ဗျာ။ ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိနဲ့ ။ ပိုက်ဆံသာပေးကြည့်ပါလား။ ထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးမဲ့အထိလုပ်အုံးမှာ။
ဒီတော့ ဒီမှာ အမကြီး…ခင်ဗျားတောင်းပုံကလည်း ရီရတယ်။ အခုခေတ်က ငါးကျပ်တန်ကော မြင်ဘူးလို့ လားဆိုပြီး မေးတော့ မျက်နှာပျက်လို့ ။ သူ့ ကြည့်တော့ သန်သန်မာမာကြီးနဲ့ ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့ မှာ နဲတာမဟုတ်ဘူး။
ရထားကလည်း အထူးတန်းသာပြောတယ်….နိုင်ငံခြားက ရိုးရိုးတန်းတောင် သူ့ ထက်သာသေးတယ်။ လမ်းဘေးမှာလည်း အီးပုံတွေက နဲတာမဟုတ်ဘူး။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို မေးကြည့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘွဲ့ ရရင် ဘာအလုပ်ရလဲဆိုတော့… မသိဘူးတဲ့ဗျာ။ ကောင်းရောပဲ။ ဒါဆိုရင် အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘွဲ့ ယူတာ ဘာလုပ်ဖို့ လဲ။ လူငယ်တွေ ဘွဲ့ ဝတ်စုံကြီးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက် အိမ်ဦးခန်းမှာ ခန့် ခန့် ကြီး ချိတ်ထားပြီး အလုပ်ကြတော့ မရှိတဲ့လူတွေဟာနဲတာမဟုတ်ဘူး။
(သူများနိုင်ငံတွေမှာ သူတို့ တွေကျောင်းမပြီးခင်အလုပ်ရအောင် Graduate Program လို့ ခေါ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို အစိုးရက စဉ်းစားပေးတယ်။ စီစဉ်ပေးတယ်။ အခု ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လူကြီးများ စဉ်းစားထားချက်တောင် မရှိသလိုပဲ။ Company တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကျောင်းတွေက ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်သင်လိုမျိူးကို ဖြစ်အောင်အစိုးရက ကြားဝင်ပေးဖို့ လိုနေတယ်။ ဒါမှ သူတို့ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်ရမှာပေါ့။ နိုင်ငံခြားက တက္ကသိုလ်တွေက မြန်မာပြည်လို မဟုတ်ဘူး။ တက္ကသိုလ်တိုင်းဟာ Industry တွေနဲ့ ချိန်ဆက်ထားတော့ ကျောင်းသားတွေအလုပ်ရတယ်။)
၊ပြီးရင် အလုပ်ပေးဖို့ စဉ်းစားကြရမယ်။
ခက်တာက ဘွဲ့မရခင် လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ဘွဲ့လည်းရပြီးရော နိုင်ငံခြားသွားမယ်ချည်း ဖြစ်ကြတာပဲ။
အဲဒီလောက်လစာလည်း ပြည်တွင်းမှာ မရနိုင်သေးဘူးကိုး။
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အလှူခံမလာတာ နှိုင်းယှဉ်စရာမဟုတ်ပါ။
“အလှူခံတယ်ဆိုတာကလည်း သူတောင်းစားတမျိုးပဲ။“ ဆိုတော့
မကြာသေးခင်က ရွာက ကျနော်တို့ အိမ်ကို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ 
ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်( အစစ်လား၊ အတုလားမသိလို့ဒီလိုခေါ်တာ) လာအလှူခံတော့ 
မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်လို့ လားမသိ ကွက်ကနဲ မျက်နှာပျက်သွားပြီး နည်းလိုက်တာဆိုရင်း
ဟင်း..ဟင်း…ဟင်း တောတွင်းပျော် ကိုယ်တွေ့ နော်… တကယ့်ကိုယ်တွေ့ ။ ။။
ဖင်မနိုင်ပဲနဲ့ ပဲကြီးဟင်း စားရင်တော့
( လှူရတာများတော့ အရမ်းဆင်းရဲတာပေါ့ )
( ဓမ္မဖက်ကဆိုပိုတောင်ဝေးသေးတယ် )
တစ်ခါတစ်လေသတိထားမိမလားဘဲ ကိုယ်က ပေးခြင်ကြွေးခြင်ပေမယ့်
ကိုယ်တစ်ကယ်သဒ္ဓါ၇ှိတဲ့သူက ကိုယ့်ရဲ့ ပေးခြင်း ( အလှူ ) ကိုအလိုမရှိဘူး
ကိုယ့်မိဖတွေကို ကိုယ်က တစ်ခုခုသော ပစ္စည်းအဟာရ ကိုပေးလိုက်တယ် ( လှူတယ် ) ဆိုပါစို့
မိဖတွေက ကိုယ်ပေးလိုက်တာ ( လှူလိုက်တာ ) ကို အကုန်မသုံးစွဲဘူး
အခြား သူ့သားသမီး ( ကိုယ့်ညီကိုယ်မောင်နှမတွေ ) တူသားမြေးမြစ်တွေကို ပေးလိုက်ရော
( အစိုရအာဏာရှိသူတွေ ) ရဲလိုသတ္တဝါတွေနဲ့ ( အချို့သော ) အလှူခံတွေကနေ အ ဓမ္မအလှူခံလို့
ဓမ္မ ဖက်ကအလှူနဲ့ လုံးဝမတူးဘူး
ကျုပ်အဘိုးက ထန်းပင်စိုက်ထားတဲ့အတွက် ကျုပ်အဘကထန်းရည်သောက်ရတယ်
ဒီတော့ကာ ကျုပ်အဘအစီမှာ အသိတရားတစ်ခုဝင်လာတယ်
အဲ့သည်နေရာမှာ ထန်းရည်မသောက်ရတာက ကျုပ်အဘိုးဘဲ
သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သမ္ဘာ့သမိုင်းကြီးနဲ့ ပြန်တွေးရင်
သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေ ဟာ အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်ပြောရမလားဘဲ
ကျုပ်တို့လည်း ကျုပ်တို့ရဲ့ နောင်လာနောင်သားတွေတွက် ထန်ပင်စိုက်ဘို့ဘဲလိုလိမ့်မယ်
ကိုယ့်စီမှာထန်းပင်မရှိလို့ သူများထန်းပင်ပေါ်တက် သူများရဲ့ထန်းရည်ခိုးသောက်ပြီး
( ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆုမရလို့ ညစ်နေတယ်နော်……. )
ကဘုန်းကျော်ရဲ့ အမြင်ကို အမြင်အတိုင်း
ရေးပြ၊ တွေးပြသွားတာလည်း မိုက်တာပဲ …
ဘပုရဲ့ မတူသော အမြင်နဲ့ မန့်ချက်ကလည်း
ဒီပို့စ် ဝင်ဖတ်ရတာ ကျုပ်အတွက်တော့ တန်သွားပြီ …။
ဘပု ဆုရရင် လာယူမလားလို့ မေးဂျင်ဘာဒယ် …
ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တဲ့အမြင်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် လေးရေးချပြသွား တဲ့ ရေးဟန်ကိုကြိုက် ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်မှာ ဆိုပေမဲ့ လဲ အလှူခံ အတုတွေ၊ အလွန် အကျွံဖြစ် လာတဲ့တောင်းစား သူတွေကြောင့် ပြောစရာ ဖြစ်လာတယ်၊ စိတ် အနှောင့်အရှက် ဖြစ် ရတယ်ဆိုတာ ကြုံဘူးသူတိုင်း ဘယ်သူမှ ငြင်းမရ ပါဘူး။ ကျွန်တော့ အမြင်ပြောရရင် ဥပမာ .. ဘာကြောင့်သန်သန် မာမာကြီးတွေလိုက်တောင်း စားလဲ ? ပေးတဲ့သူ ရှိလို့ပေါ့၊ ဟုတ် တယ်ဟုတ် ? ကျွန်တော်လဲ ပေးခဲ့မိ ဘူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အစောက ပြောတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးမိက တဲက လာတောင်း ရင်မပေး တော့ဘူး။ သူ့ဟာ သူစိတ်ဆိုး ရုံမက လဲဘဲသေ သေ ဗျာ။ ကျွန်တော် ကျောင်းသား ဘဝ က တစ်ခါ အဲလိုဘဲ၊ သန်သန် မာမာ ကြီးနဲ့ လာတောင်းဘူး တယ်၊ ခင်ဗျား ကလဲတစ် မျိုး ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် တောင်၊ မုန့် စားဖို့ မ ရှိတာလို့ ပြောမိ လို့၊ ကိုရွှေ သူတောင်းစားက ဘာလဲ သူဝယ် ကျွေးရ မလားတဲ့ ။ လုပ်လိုက် လေကြာသလားလို့ ဆိုတော့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်။ တစ်ကယ် လဲကျွန်တော့ဆီ မှာ အဲဒီတုံး ကပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ ရှိမနေ ခဲ့ပါဘူး ။ ခင်ဗျား မုန့် ဝယ်မကျွေး ဘဲ၊ ဘယ်မှ မသွား ရဘူးဆို ပြီး ညစ်ညစ် နဲ့လိုက်တွန်း တာထွက်ပြေး လိုက်တာ တန်းနေတာဘဲ ။
စကား မစပ် မူးနေရက် ကြီးနဲ့ဘုရား တက်တာတော့သိပ် မမိုက်ဘူးနော်။
ကိုအောင်ပု ရဲ့ ထန်းပင် ဥပမာ လေးကြိုက်ပါ၏ ။
ဆာလောင်သူကို ကိုယ့်ထဲက တစ်ဝက်ဝေမျှလိုက်….။
( ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားလေးပါ။)
ပကာသန လူထင်ကြီးတဲ့ အလှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်ရှိတဲ့ထဲက နိုင်သလောက်လေး မရှိသူများထံ သို့မဟုတ် လိုအပ်နေသူများထံ
မျှဝေရုံလေး မျှဝေမှု့ မျှသာ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းနေ..ကိုရင်..ကပ္ပိယတွေပေါင်းရင်.. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမရှိတဲ့.. လူဦးရေ ၁သန်းအသာလေးလို့..ခန့်မှန်းမိပါတယ်..
ထမင်းတနှပ် ၁ ဒေါ်လာ(ကျပ် ၈၀၀ကျော်) လို့တွက်ရင်.. တရက် ၂ဒေါ်လာကုန်ကျစရိပ်လို့တွက်နိုင်မှာပါ..
လူသားမှာလိုအပ်တာက.. စား၊၀တ်၊နေ၊ရေးပါ.. အဲဒီအထဲ.. စားရေး(စားရေး)တခုထဲ.. ဘုန်းကြီးများအတွက် မြန်မာတွေပေးလှူနေတာ တရက်ဒေါ်လာ ၂သန်းဖိုးရှိပါတယ်..
တနှစ်ကို.. ၃၆၅ရက်မို့.. ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၇၃၀လို့မြင်သာပါလိမ့်မယ်..။
ဟိုလျှော့ဒီလျှော့..အစွမ်းကုန်လျှော့ချရင်တောင်.. သန်း၅၀၀ အသာလေးရှိပါတယ်..
ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်.. အကြွေးဘီလီယံ၁၀မကရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်က… ပေးလှူပေးဆပ်နေတာတွေပါ..။
တနှစ်မဟုတ်..၁၀နှစ်မဟုတ်.. နှစ်၁၀၀ မဟုတ်(မက)ပါ…
မြန်မာပြည်မယ်.. လူဦးရေ..သန်း၅၀.. အိမ်ထောင်စု.. ၁၀သန်းလို့အကြမ်းဖျင်းတွက်ပါမယ်..
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နတ်ကိုးကွယ်သူ.. အိမ်ထောင်စု.. ၅ပုံ၁ပုံ.. ၂သန်းအသာလေးရှိမယ်လို့..ခန့်မှန်းပါတယ်..
ဆိုတော့… အုန်းသီး..ငှက်ပျောသီး.. ငွေ..ရွှေ..
ကြုံရင်.. တွက်ကြည့်ပြီး.. ဂဏန်းစားသွားကြစေလိုပါကြောင်း…
အလှုမင်္ဂလာ ဆိုင်းဝိုင်းတွေတော့ သောသောညံတီးနေစဲ၊
ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပ သူကြီးရေ။
ရဲဘော် ဆက်လုပ် …… လိုဘဲပြောရမလား၊
ရဲဘော် သက်သာ အေးဆေး တန်းဖြုတ်ဘဲ …………ဆိုရမလား သိတော့ဘူးဗျာ။
အခုကအသည်းအသန်စပြင်ကြ..လုပ်ကြ..သိကြ..ပါရင်.. နောင်မျိုးဆက် ၂ခုလောက်မှာ.. ကောင်းသွားနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးလုပ်နေတာပါ..
လက်ဆွဲတော်ကဗျာကြီးကို..ထုတ်ထုတ်ပြနေတာက.. ဒါတွေကို ဆရာကြီးဇော်ဂျီမြင်ခဲ့တယ်လို့.. ထင်လို့ပါ..
သူကနေ.. မျိုးဆက်.. ၂ခုမကကျော်ခဲ့ပြီလေ…
အလွန်ကြာပြီဆိုတော့ သူကြီးရေ မြန်မာပြည်အတွက်တော့
ပြုပြင်မှု့တွေ အတော်ကို လိုတယ်လေ……….။
ခက်တော့ ခက်သား ပါးလားနော်။
၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်က ရွှေတောင်ကားနဲ့ အသွား အောင်မင်္ဂလာကားကြီးဝင်း
မှာ ကားထွက်ခါနီး ကိုရင်တစ်ပါး တက်လာတယ်။စာအိတ်ကလေးတွေ လိုက်ဝေတယ်။
စာသင် သံဃာများ စာအုပ်စာတမ်း မလုံလောက်သဖြင့် ဆိုပြီး အလှူခံတယ်။
တကယ် စာသင်တိုက်တွေက အလှူခံခိုင်းထားလို့လား။
ငွေလိုနေတဲ့ ကျောင်းသေးလေးတွေက အလှူခံခိုင်းထားတာလား။
သင်္ဃန်းခြုံပြီး လိမ်ညာ အလှူခံတာလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သဘောမကျလို့
တားဆီးချင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ လာဝေတဲ့စာအိတ်လေး သိမ်းထားလိုက်တယ်။
မန်းဂေဇက်မှာတင်ဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း။ ဒါပေမယ့် ဆင်းတော့ ကားပေါ်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။
ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ရေလိုက်ငါးလိုက် မျှောမလိုက်ပဲ ၀ိုင်းတားဆီးကြရင်
ဒါမျိုးတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။လူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါသည်။
1 ဘာသာရေး အရေခြုံပြီးလုပ်စားနေသူတွေရှိတယ် ။
2 လူတွေကလဲ ငါလှူလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးလက်ခမောင်းခတ်ချင်တော့ ကိုယ့်ရှေ့လာသမျှလူကို
အကုန်ထည့်တယ်(ကိုယ်ခြင်းစာနာစိတ်ဖြင့် အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်သူကို ကူညီသူများမပါဝင်ပါ)
3 သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါတာ ဒါနဘဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင်စွဲပြီးနောက်ဘ၀အတွက်ကြိုတင်လို့
စုဆောင်းသူတွေကလဲ ရက်ရက်ရောရောလှူကြတာလဲ ငြင်းမရဘူးနော်။
4 သာသနာတည်မြဲဘို့အတွက် (ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို)သာသနာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးသူကတော့
5 ဒါပေမယ့် သာသနာအရေခြုံတွေကို ဖယ်ယှားရမှာကတော့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
6 တကယ်လို့များ သူကြီးပြောသလို စစ်ပွဲတွေရပ်ခိုင်းပြီး စစ်သားတွေကို တပ်က ထွက်ခိုင်းလိုက်မယ် နောက်ပြီးတော့ သာသာနာပြုနေတဲ့ရဟန်းအစစ်တွေရော
အရေခြံရဟန်းအတုတွေကိုပါ လူဝတ်လဲခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အလုပ်အကိုင် ပေးနိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဘွဲ့ရလူငယ်များမှာတော့ ထမင်း၀၀စားရမယ် အလုပ်ကို မရနိုင်သေးတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
တိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထူထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရော အစိုးရထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါ အလုပ်လုပ်ချင်သူကို အလုပ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။
အဲတော့ စကားပုံခပ်ရိုင်းရိုင်းနဲ့နိုင်းရင် ဆင့် ဟိုဟာ ခွေးမျော်ဆိုသလို သူများနိုင်ငံကလာပြီးရင်းနှီးမြုတ်နှံမယ့်သူကိုဘဲ ထပ်မျှော်နေတဲ့ဘ၀ကိုရောက်နေအုံးမှာပါဘဲ။